Siberian Husky: incazelo zohlobo
East laseSiberia Laika zohlobo uvele ngaphansi kwezimo ezinzima zezulu we Ekude naseSiberia, abameleli bayo ziye kabanzi indoda a professional ukuzingela game, uboya, ngisho isilwane kangaka sifana nebhere, amaphiva futhi reindeer. Ngaphezu kwalokho, behluleka-ephephile Siberian Husky inja isihlibhi, ngokuzikhandla usebenza kuthimba ngo yimuphi sezulu.
East laseSiberia Laika - iyona enkulu kunazo zonke Siberian Husky. Esikhathini forties, umphathi game abramov, KG ngowokuqala ukuchazela lokhu zohlobo. Indinganiso yasungulwa ngo-1949. Ngenxa Fusion Amur, lamudskih, Evenk, kanye namanye amaqembu afanayo intrapedigree izinja ukuzingela umsuka zohlobo East European. izinhlobo Eyingqayizivele izinja inbreeding zibangelwa inyumbazana ngenxa nemizana expanses enkulukazi eSiberia. Lezi zihlanganisa "karamistaya" futhi "Tunguska" ukuthandwa.
Husky eSiberia, efana izinhlobo eziningi ukusebenza, liwumkhiqizo kwemvelo. Ngaphansi kwezimo ezinzima yasendle igcinwe kuphela abameleli eziqinile kunazo, eqinile futhi uhlakaniphile, futhi kuphela omunye umuntu izinja kweshumi wabonisa nokufaneleka kanye nekhono ukuzingela. Nakuba engakwazanga okunenjongo umsebenzi yokuzalela ukususwa zohlobo East laseSiberia, ngokusho kongoti, mayelana 80% ukuzingelwa purebred huskies. umcwaningi A.Gerts, wafunda ngamandla edwaleni sixties kwekhulu lamashumi amabili, ke yayinabantu obuyizinkulungwane 70 izilwane purebred. zizalela Professional East Siberian Husky awuqala yoma zenzeka ekhulwini lamashumi amabili, e-Irkutsk naseLeningrad kuyo. Kuze kube manje, lokhu zohlobo akuyona ngokwanele wafunda futhi esikalini ochwepheshe kanye Ongoti ngokuzingela izinja.
Ngaphandle lokhu Husky eSiberia iyahluka kwenye izihlobo eliseduze isinqumo yaso ephezulu. ukuphakama kwalo kuyinto 56-64 cm nesisindo 18 kuya ku-23 kg. Uqinile futhi kwemisipha, kancane ngezabelo welulela, yemihlathi eqinile, ugebhezi esingagwegwesi, iqoqo ngqo, amehlo aphumele ngaphandle izindlebe. East laseSiberia Tail Husky eligoqiwe emuva ukuba iringi, ke unamandla okuvusa ke ngesimo isikela.
Imibala ezihlukahlukene izinhlobo of izinja kukhona grey Sable, nezimagqabhagqabha nge izilongotshane, ezimhlophe, ezimpunga, ezimnyama, ezibomvu futhi abomvu amnyama kuzo zonke shades. Ivunyelwe izilongotshane elincane ezihlukile emachosheni. Itshwayo zohlobo thoroughbred esintamo omele touch, anolaka, ogcwele, le undercoat kuyinto aminyene futhi ezithambile. Puppies East laseSiberia Laika, kwenza babe kancane kuka nomdlwana West eSiberia futhi izinhlobo Russian-European.
Ubunjalo inja olinganiselayo nokuzola. Kuyinto ngokuphelele amenable nokuqeqeshwa, ezinokuthambekela sina futhi okunenjongo maqondana nemfundo yakhe (eqinisweni esihlobene impisi ine umphumela). Ukuze eMpumalanga laseSiberia Laika izimo ezikahle kakhulu - indlu ezweni nge egcekeni elikhulu, lapho ayengase sebehamba ngokukhululeka besuka ezweni. Uma unquma ukufaka Husky e evamile edolobheni efulethini, kuyodingeka ukuba uchithe isikhathi esiningi kuyi-ukuzihambahambela ne nja, okuyinto okungcono ipaki noma ihlathi. Ngenxa yalokhu zohlobo asebenzayo lidinga umsebenzi ehlelekile.
Okuqukethwe huskies akuyona osindayo abanikazi wakhe. Inja silalele futhi ehlakaniphile, akudingi imali eshisiwe. Abameleli zohlobo akuyona finicky kakhulu yokudla, bona uvumelane ukuthi kwesokunxele kusuka etafuleni lakho. Nokho, ukuqinisekisa efanele futhi egcwele yokudla nomdlwana huskies, kufanele zifakwe zabo imikhiqizo yokudla yobisi, okusanhlamvu, inyama, imifino kanye nemikhiqizo inyama, inja wahlala umqemane iminyaka eminingi.
Laika yinja inobungane, idinga uthando olukhulu futhi ngizinaka, ngakho ngaphambi kokuba uqale puppy akhawunti amathuba zazo zangempela, hhayi yezinto ezibonakalayo kuphela kodwa futhi zokuziphatha.
Indlela ukwandisa amangqamuzana amhlophe igazi emva nokwelashwa ngamakhemikhali